लामखुट्टेले कस्ता मानिसलाई बढी टोक्छ? – MEDIA DARPAN
तपाईमा मस्क्युटो म्यागनेट जिन हुनुपर्छः तपाईको शरिरमा लामखुट्टेलाई आर्कर्षित गर्ने जीन छ भने पनि धेरै लामखुट्टे झुम्मिन्छन्। सन् २०१३ मा प्रकाशित जेनेटिक्स एन्ड इभोलुसनमा मानिसमा हुने ह्युमन ल्युकोसाईट एन्टिजेनले मानिसमा बढी लामखुट्टे आर्कर्षित गर्छ। यी जिनले मानिसको शरिरबाट आउने गन्धलाई नियन्त्रण गर्छन्। मानिसले निस्काशन गर्ने रसायनयुक्त गन्धका कारण लामखुट्टे बढी आकर्षित हुन्छ। तसर्थ तपाईं समूहमा हुनुुहुन्छ भने पनि सोही गन्धका कारण लामखुट्टे तपाईको शरिरमा झुम्मिन्छ। लामखुट्टेले टाउको, अनुहार, हात, खुट्टा लगायतका विशेष ठाँउमा मात्र टोक्छन्।
SEE नतिजा प्रकाशित ! यसरी हेर्नुहोस् नतिजा